Barashada: maaraynta waxyaabaha aan la garaneynin waa suurtagal Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Waxbarashada Aqoon la'aan
"Waxyaabaha aan wax qorin ee qarniga Xooma ah ma noqon doonaan kuwa aan akhriyi karin oo wax qori karin, laakiin kuwa aan wax baran karin, aan waxna baran oo dib u baran."
- Alvin Toffler, aqoonyahan mustaqbal leh (Toffler, A. 1970 “Shock Future”), Random House
Xaaladeynta iyo mukhadaraadka waxay ku dhaqmaan caadooyinka qotoda dheer leh. Marka la eego waxa aan ognahay neuroplasticity, waxaa jira rajo ah in aan karayn karno caadooyinka aan naga caawino inaan horumarinno. Inkasta oo khariidadaha maskaxda ee aan abuurnay ayan marnaba tegin, waxay hoos u dhigi karaan iyadoo aan la isticmaalin. Si aan u dardar gelinno si aan u horumarino caadooyinka cusub waa wax yar sida waraabinta dhirta cusub iyo kuwa horey u sii daaya. Waxay qaadataa wakhti iyo dadaal joogto ah si ay u bedesho dabeecada iyadoo xusuusta raaxada iyo calaamadaha soo baxaya xusuustaas had iyo jeer waa ay jiri karaan inay na jirraan. Iyada oo aqoonta iyo taageerada, waxaan ku guuleysan karnaa isbedel weyn.
Aqoonsiga Cudurka Halista ah ee "Mukhaadirku waa cudur asaasi ah oo dabiiciga ah ee abaalmarinta maskaxda, dhiirigelinta, xusuusta iyo wareegga xariirka ..." waa horumar hore u weyn wuxuuna kaa caawin karaa in laga takhaluso dhaleeceynta badanaa ku xirnayd mukhaadaraadkii hore sida qaar nooca niyad-jabka ama daciifnimada. Waxay naga caawinaysaa inaanu macno samayno oo ka mid ah dabeecadda muuqda ee internetka ee soo jiidashada leh ee dad badani la qabsadeen. Maskaxda ugu fiican ee IT iyo warshadaha xayaysiinta ayaa hubiyay in taas.
Xaqiiqda ah in cabsida waliba ay tahay nidaam, dabeecad la bartay, ayaa nooga warhayn kara istiraatiijiyado ka hortag ah kahor intaanan, ama kuwa nagu dhow, xitaa aad uga fogaato xakamaynta, sida dib u noqoshada ay noqon karto mid dheer iyo mid murugo leh.
Sheekada rooga waa kaalmo waxbarasho oo ku habboon halkan. Sheekadu waxay ku socotaa in cilmi-baarayaashu ay roogu ku riday biyo kulul. Waxay isla markiiba soo baxday, jawaabteeda dabiiciga ah ee dabiiciga ahi waxay u nugul tahay hanjabaad degdeg ah. Markii ay roogu soo geliyeen biyo qabow si kastaba ha noqotee, kuleylka ayaa si tartiib tartiib ah u riday, roogu waa la kariyay, waana la dhintey. Rooggu wuxuu caadaystey inuu kor u kaco heerkulka kulaylka iyo jawaabta dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxay noqotey mid aan waxtar lahayn nolosheeda. Tani waxay ku dhici kartaa qofkasta markaan lumino dareenka nalagaaga iyo jawaab-celinta niyad-jabka aan ku guuleysanayno in ay naga badbaadaan.
<< Muuqaalka Porno & Hore ee Galmada Balwadaha Internetka >>